I-WorldPride Madrid 2017, umhlahlandlela ocacile wemikhosi yokuziqhenya | Izindaba Zokuhamba
UPuerta de Alcalá eMadrid
Kusukela ngoJulayi 23 kuya ku-2, iMadrid inokuningi okufanele ikugubhe. Ngaphansi kwesiqubulo esithi "Thanda obathandayo, iMadrid iyakuthanda", idolobha lizokwamukela bonke abazothokozela iWorldPride 2017, umcimbi obaluleke kakhulu emphakathini we-LGTB emhlabeni jikelele.
Umkhosi omkhulu oqondana neminyaka engu-40 yokubonakaliswa kokuqala kokuziqhenya kobungqingili eSpain. Ngaphezu kwalokho, sekuyiminyaka engama-30 kusukela kugujwa okokuqala endaweni yaseChueca, iminyaka engama-20 selokhu kwantanta okokuqala kulo mbukiso neminyaka eyishumi ye-Europride eMadrid.
Ngesikhathi salolu suku olubalulekile, iMadrid iphendukele kulemikhosi ekhomba ukuqala kwehlobo ngohlelo olukhulu lwemisebenzi yamasiko nokungcebeleka ezingxenyeni ezihlukene zenhlokodolobha.
Ngakho-ke, uma uhlela ukuvakashela iMadrid kulezi zinsuku, ngezansi sikunikeza umhlahlandlela ocacile ukuze ungaphuthelwa yimicimbi ehleliwe. Vumela umculo nombukiso ziqale!
1 I-WorldPride Madrid 2017
2 Umkhosi We-WorldPride
3 Ukukhonjiswa nokubonisa kokuntanta
4 Imicimbi yamasiko
I-WorldPride Madrid 2017
I-WorldPride 2017 izoqala ngeSimemezelo ngoJuni 28 ePedro Zerolo Square. Izinombolo zamasiko nezikaqedisizungu ezifana noCayetana Guillén Cuervo, uBoris Izaguirre, u-Alejandro Amenábar, uTopacio Fresh, uPepón Nieto noJavier Calvo noJavier Ambrossi bazophatha ukwenza umcimbi wokuvula le mikhosi.
Izinsuku ezandulela Ingqungquthela yaseMadrid izobanjwa (ngoMsombuluko 26, ngoLwesibili 27 nangoLwesithathu 28), ingqungquthela yomhlaba emayelana namalungelo abantu ezokwenzeka esikhungweni saseCantoblanco se-Autonomous University of Madrid.
Izobhekana nezihloko ezahlukahlukene njengezimo zomphakathi odlulayo emhlabeni, amasu ezemidlalo namasu afaka wonke umuntu, inkolo kanye nezocansi, ukufuduka kanye nababaleki, umsebenzi we-Intanethi kanye nezinkundla zokuxhumana ukunikeza ukubonakala kwabambalwa, ukuhlanganiswa kabusha kusuka ezincwadini kuya Umphakathi we-LGTB, ukumelwa kobunikazi kanye namasiko okubukwayo, njll. Zonke lezi zindaba kuzobhekwana nazo ngendlela elinganayo nehlukanisayo, njalo evulekele izingxoxo.
Isikhulumi esiyinhloko salo mcimbi kuzoba ngumongameli wangaphambilini waseSpain uJosé Luis Rodríguez Zapatero, ozobe ephelezelwa abanye osopolitiki abafana noJohanna Sigurdardottir (owayengumongameli wase-Iceland kanye nowesifazane ongungqingili wokuqala owayeyinhloko kahulumeni emhlabeni), uDaniel Viotti (iphini lePhalamende laseYurophu), uTamara Adrián (iphini nommeli waseVenezuela) kanye nezishoshovu ezifana noSedef Kakmak noma uKasha Jacqueline Nabagesera.
Ngokunjalo naseMadrid iWorld Pride Park izovulwa okokuqala ngqa nePuente del Rey eMadrid Río (kusuka ngoJuni 28 kuya kuJulayi 2). Kuwo, amaqembu nezinhlangano ezahlukahlukene zizokwenza imihlangano yokufundisana, izingqungquthela namatafula angqukuva kanye nenqwaba yemisebenzi ebhekiswe kuzo zonke izethameli.
Isithombe | We bafowethu
Umculo awukwazi ukungabikho emicimbini yokuziqhenya. Ngalesi sizathu, kuzoba nezigaba eziningi ezisatshalaliswa ezindaweni ezahlukahlukene zaseMadrid ukujabulela uhlelo lwe-eclectic olufaka imisindo yesiLatin, idwala, i-elektroniki, umdanso, i-cabaret, njll.
Abaculi bakazwelonke nabakwamanye amazwe abanjengo-Ana Torroja, u-Alicia Ramos, u-Ania, u-Azúcar Moreno, uFleur East, u-Ivri Lider, uKate Ryan, uLe Klein, uLoreen, uBaccara, uBarei, uCamela noma uConchita Wurst bangabanye babaculi abangajatshulelwa phakathi nalezi izinsuku ezigabeni zePlaza Pedro Zerolo, iPlaza del Rey, iPlaza de España, iPuerta del Sol nePuerta de Alcalá.
Kufanele kukhulunywe ngokukhethekile ngomjaho wesithende wendabuko (ngoJuni 29 ku-Pelayo Street endaweni yaseChueca), isivivinyo esimnandi kakhulu kodwa futhi esigcwele nobunzima.
Ukukhonjiswa nokubonisa kokuntanta
Isithombe | Amandla wesine
Usuku olukhulu lweWorldPride Madrid luzoba ngoMgqibelo, Julayi 1. Ukubonakaliswa okukhulu kokuntanta, umculo nokuziqhenya okukhulu kuzohamba emigwaqweni yenhlokodolobha njengonyaka minyaka yonke ukukhuthaza abantu bendawo nabavakashi ukuthi bajoyine lo mkhosi omkhulu wokwehlukahlukana.
Kulindeleke ukuthi abantu abangaphezu kwezigidi ezimbili nezinhlangano ezivela emhlabeni wonke zihambe emigwaqweni emikhulu yedolobha, phakathi kwe-Atocha nePlaza de Colón, isenzo sokugubha nokulwela amalungelo alinganayo.
Izikhungo eziningi nezikhungo zamasiko zizonikela ngemisebenzi ehlobene nomphakathi we-LGTB.
Isibonelo, iThyssen-Bornemisza Museum iphakamisa ukuvakashelwa kokuqoqwa kwayo ngezinhlobo ezahlukahlukene zothando ezingaba khona ngaphansi kwesihloko esithi "Uthando Oluhlukahlukene." Ngokufanayo, iMnyuziyamu yaseMelika yethula, kusukela ngoJuni 23 kuya kuSepthemba 24, umbukiso waseTrans, uhambo lomlando nobuciko ngezinkulumo ezahlukahlukene ezihlobene ne-transgender.
Ngokwengxenye yayo, iPrado Museum izokhombisa i- "The Look of the Other: Scenarios for Difference", umbukiso osimema ukuba sicabange ngeqiniso lomlando wothando phakathi kwabantu bobulili obufanayo.
IMuseum of Romanticism nayo ijoyina iWorldPride ngohambo lokuthatha izithombe oluzovulwa isonto lonke. Umbukiso unesihloko esithi "Karheim Weinberger embuthanweni wamahlongandlebe."
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » travel » Yini ongayibona » I-WorldPride Madrid 2017, umhlahlandlela ocacile wamaqembu wokuziqhenya
Ndiza uhlale eTenerife kusuka kuma-euro angama-118 ngeDestinia